အိမ်မက်တွေဖြစ်ရင် – Grab Love Story
လောကကြီးမှာ ထင်တာတွေက မဖြစ်လာပဲ မထင်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာ တကယ် ပါပဲ ကိုမောင် နဲ့ ချစ်ခဲ့တာ ရပ်သိရွာသိ ၇ နှစ်ကျော်တယ် သူလုပ်ချင်တာတွေ မှန်သမျှ တွေအကုန် ဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ် ကိုမောင် ကရည်းစားဦးလေ ဆယ်ကျော်သက် တက္ကသိုလ် စတတ်တော့မှ တွေ့ တာ အရင်တုန်းထဲ က ဆယ်တန်းထိ ရည်းစာတောင် ထားခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ကိုမောင် နဲ့တွေ့ တော့မှ ရင်ခုန်ခဲ့တာ ကိုမောင်က ရုပ်တော့ မချောပါဘူး အရပ် ပုပု နဲ့ ပါပဲ သူ့ မှာ တစ်ုကောင်းတာက ပြေလည်တဲ့ စီးပွားရေးးကောင်းကောင်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ထက် အသက် ၃နှစ်လောက်ကြီးပြီး တဏှာရာဂ လည်းသိပ်ကြီးတဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ့ သူနဲ့ စကြိုက်ပြီး ၃လလောက် ကြာပြီးတော့ စလိုးခံရတော့တာပဲ ကောင်းကောင်းလိုးပေးနိုင်တယ် အဲဒီ့အတွက် ဗဟုသုတ လဲ စုံတယ် အောကားထဲက နည်းပေါင်းစုံလဲ စမ်းခဲ့တယ် အနောက်ကတော့ တစ်ခါတော့ စမ်းဖူးတယ် သိပ်ပြီးတော့ ခံစားလို့ မကောင်းဘူး သူလဲ သိပ်မကြိုက်တာလဲပါတာပေါ့ သူနဲ့ ကြိုက်ခဲ့တဲ့ တစ်လျှောက် ကွန်ဒုံးဆိုတာ တစ်ခါမှ မသုံးခဲဖူး သူက အရည်တွေ အထဲထည့်ုပြီး အဖုတ်သားတွေ ကို သူ့ လီးနဲ့ ထိတွေ့ မှု အရသာကို ကြိုက်တယ် ဖာချမှသာ ကွန်ဒုံးသုံးတာ တကယ်ပြောတာ သူများတွေ ယုံချင်မှ ယုံမယ် လိင်ကိစ္စအတွက် ကျွန်မ လုံးဝသဝန်မတိုတတ်ဘူး ကျွန်မကို ချစ်နေဖို့ ရယ် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ဖွင့်ဟဖို့ ရယ်ပေ့ါ ကေတီဗွီ တွေ သွားတုန်းကဆို ကျွန်မက ရာသီလာနေတာလေ သူနဲ့ အတူတူ သွား သူငယ်ချင်းတွေပါပေါ့ သူက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရွှေ့ တော့ ကျွန်မကို မျက်စ ပစ်တယ် ကိုယ်ကလဲ အမ လိုပဲပေါ လုပ်ပေါ့မသိချင်ယောင် ဆောင်ပေးတယ် နောက်နေ့ ကျတော့ သူ့ တိုက်ခန်းမှာ ကောင်မလေးကို ခေါ်လုပ်တော့တာပဲ တစ်ပုံးလောက်တော့ ပေးလိုက်ရတယ် ပြောတာပဲ။
ပြီးတော့ ကိုမောင်ကပြောသေးတယ် မင်းနဲ့ လိုးရတာလောက်တော့ မကောင်းဘူးတဲ့ ဘယ်ကောင်းမလဲ စိုးစိုးဆိုတာ ဒီယောကျာင်္းတစ်ယောက်ထဲနဲ့ ဖြစ်ဖူးတာလေ ဘယ်တူပါ့မလဲ အရသာချင်းတူုရင်တူမယ် သံယောဇဉ်ချင်းကမတူ တန်ဖိုးချင်းလဲမတူ ပညာအရည်အချင်းလဲမတူ တဲ့ အပေါစားမိန်းမတစ်ယောက်ကို သူစွဲလန်းပြီး ကိုယ့်ကို စွန့်် ခွာသွားမယ် ဘာဝမ်းနည်းစရာ ရှိမလဲ အောကားကြည့်ပြီး စောက်ရည်ပဲ အထွက်ခံလိုက်တော့မယ် ချစ်တာကတော့ ချစ်တာပေါ့ ထားပါ ကွဲသွားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ တော်တော်ဆိုးပါတယ် အိမ်မှာလဲ အင်တာနက် ချိတ်ထားတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကာမကိစ္စတွေ ပြောတယ် သူတို့ မေးတာလေးတွေ ဖြေတယ် ကိုယ်လဲဘာတွေ ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာ ကောင်လေးတွေနဲ့ ပြောတယ် သူလဲ သိတာပဲ သူ မပါပဲ ခရီးထွက်တော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က မန္တလေးမှာ တည်းတော့ လေးတွေ ခေါ်တော့ ကိုယ်လဲ ဘာညာ လေး တွေ ကြည့်ချင်တာနဲ့ကိုယ့်ေ၇ှ့မှာပဲ လုပ်ဟာ ဆိုပြီး ကြည့်ပြစ်တာ ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းတဲ့ လူတွေ ဆိုတာလဲ စိတ်တူကိုယ်တူပါပဲ အသိုင်းအဝိုင်းတောင့်တဲ့ သူတွေချင်းပဲဆိုတော့ ပြောရဆိုရကောင်းတယ် ဘယ်စကားပြော ဘယ်ရောက်လဲသိတယ် ပုလင်းတူဗူးဆို့လို့ ပြောရင်ရပေမယ့် အဖုတ်တူ လီးဆို့ ဆို ပိုမှန်မလားပဲ ကိုယ်တွေကလဲကြိုက်တော့ အဲအစီအစဉ်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ ကျွန်မကတော့ သူတို့ နဲ့ မနေချင်ပါဘူး ကြည့်ရတာလဲ ကောင်းတယ် အဖုတ်ထဲ သူများလီးထည့်တာကျတော့ သစ္စာဖေါက်သလို ဖြစ်နေတာကိုး အဲနေ့ညဘက်က သူတို့ အဒေါ်ပိုင်တဲ့ အိမ်မှာတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူး ဟိုတယ်တစ်ခုက တစ်ခန်းယူပြီးတော့ အားလုံးပေါင်းနေကြတယ် ကောင်လေးက သုံးယောက်တောင် ဆိုတော့ ကိုယ့်အတွက်မပါဘူးဆိုတော့ သူငယ်ချင်း…က အေးပါ နင့် အတွက် မဟုတ်ပါဘူး ငါတို့ အတွက်ပါ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် လေးဘာလေး ချလို့ ရတာပေါ့ ကောင်မတွေ တော်တော်ရွနေတယ် တစ်ခါတည်းပါဟာ ကောင်လေး ၃ယောက်နဲ့ဟိဟိ ည ၇နာရီလောက်တော့ ကောင်လေးတွေ ရောက်လာတယ် သူတို့ ကလဲ နဲ့အခန်းယူထားတာပါ မန္တလေးကတော့ မဟုတ်ဘူး ရန်ကုန်က သီးသန့် မှာထားတာလေ။
သူတို့ ကိုလဲ ဒီကလူတွေက ဘယ်သိပါ့မလဲ အဲ့ကောင်မတွေ ဒီကိစ္စတွေဆို တော်တော် ဥာဏ်ပြေးတယ်လေ ဘယ်လို ကာဗာယူရမလဲ နည်းအောင်ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိနေပြီးသား လူဆိုတာ ဘာပဲလုပ်လုပ် များများ နဲ့ နည်းအောင်လုပ်တတ်မှဗျနော့ ဘလက်လေဘယ် တစ်တောင့် နဲ့ အေဘီစီ ဗူးနည်းနည်း လောက်နဲ့ အမြည်းတွေပါ တစ်ခါတည်း စီစဉ်ထားပြီးသားလေ ကျွန်မကတော့ ဝီစကီလေးနည်းနည်းသောက်ဖြစ်တယ် နည်းနည်းလောက်စီသောက်ပြီးတော့ ပြီးတော့ အဝတ်အစားချွတ်တဲ့ ဖဲကစားနည်းလေး ကစားကြတယ် ကံဆိုးတာလား ကံကောင်းတာလားဆိုတော့ အတွင်းခံ တောင်မကျန်ပဲနဲ့ကွန်မအရင်ဆုံးဖြစ်သွားတယ် ဒီလိုနဲ့ ပွဲတွေများလာတော့ ချွတ်စရာလည်းမရှိတော့ဘူး ကစားနည်းလောင်းကြေးများသွားတယ် ကိုးမီး မှာ အပွင့်အများဆုံးလူက အပွင့်အနည်းဆုံးလူကို ကြိုက်တာခိုင်းဆိုတဲ့ လောင်းကြေးလေးပေါ့ အ၇င်ဆုံး ကံကောင်းတာက သူကငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ထဲက ကုလားဆင် လေးပါ တောင့်တောင့်တင်းတင်းလေး သူနိုင်တော့ အနည်းဆုံးကောင်လေးကို မှုတ်ခိုင်းတာ ကောင်လေးကို မှုတ်ခိုင်းတာ၇ိုး၇ိုးလေးမဟုတ်ဘူးရယ် ကောင်လေးထိုင်တဲ့ရှေ့မှာ လေးဖက်ကုန်းပြီး မှုတ်ခိုင်းတာ ဖင်ကြားနဲ့စောက်ဖုတ်ကို စုန်ချည်ဆန်ချည် နဲ့လျှာနဲ့ ပြေးခိုင်းတာ ကျွန်မတောင်ဘေးနားကကြည့်ပြီး အမှုတ်တောင် ခံချင်တယ် ဒီလိုနဲ့ မိနစ်တွေ တော်တော်များများဖြတ်သန်းပြီးတော့ သူတိ်ု့ လဲ ဆွဲ တော့ အသံတွေက ဆူညံနေတာပဲ ကျွန်မလဲ အဝတ်တောင်ပြန်မဝတ်ပဲ ထိုင်ကိုကြည့်နေတာ သူတို့ လိုးနေတာကလဲ ကောင်းပါတယ် စကားလေးပြောလိုက် သူတို့စမ်းချင်တဲ့ နည်းကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ပြောလိုက် ပုံစံပြောင်းလိုက်နဲ့တော်တော်ကောင်းနေကြတာ နောက်တော့ ခုနက ကုလားဆင်လေးက ကောင်လေးလီးပေါ် တက်ထိုင်ပြီး ဖင်ဖြဲပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက်ကို ထည့်ခိုင်းလိုက်တော့ တော်တော်တောင် မျက်လုံးပြူသွားတာ အဲလောက်ကြီးတော့ မလုပ်ဘူးထင်လို့ ပေါ့ ကျွန်မထင်တာက တစ်ယောက်ကို လိုးခိုင်း တစ်ယောက်ကို မှုတ်ပေးလောက်ထင်တာလေ ကောင်လေးတွေကတော့ အားရပါးရ ၂နာရ်ီလောက် ဗျင်းပြီးတော့ သူတို့ လဲ တော်တော်ကောင်းသွားပြီး ခဏနားကြတာပေါ့။
အဲတော့မှ သူငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက်က “ဟဲ့ စိုး နင်လဲ ဆွဲပါလားဟာ ကိုမောင်တစ်ယောက်ထဲဆိုတော့ မရိုးဘူးလား” ငါ့မှာ၇ိုးဖို့ နေနေသာသာ ဝတောင် မဝသေးဘူး အေးပါ နင်အမှုတ်ခံပါလား ကောင်လေးတွေက မှုတ်တာကောင်းတယ် လုပ်တော့ လုပ်ချင်တယ် ပြီးရင် အတော မသတ်နိုင်မှာစိုးလို့မမကလဲ စိတ်ချပါ အမ ဟာလေးကို မလုပ်ပါဘူး မှုတ်ပေးမယ်လေ အင်းခဏပဲနော် နင်တို့ လဲ လုံပလေ့စေ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ပေါင်ကြားထဲဝင်လာပြီး ခြေဖဝါးလေးတွေ ကို လျှာနဲ့ စယက်ပေးပါတယ် ပြီးတော့ ပေါင် နောက်တော့ ရွှေခရု ဖင်ကြား တစ်နေရာမှ တံတွေးလွတ်တာမရှိပါဘူး မျက်လုံးတောင်မဖွင့်နိုင်ဘူး ကောင်းနေရင် မျက်လုံးမဖွင့်ချင်တာက စိုးစိုး ရဲ့ အမှတ်အသားလေ မျက်လုံးမှိတ်နေတုန်း လက်ထဲ ရောက်လာတာက လီး နှစ်ချောင်း ဟိဟိ ဟိုကောင်မနှစ်ကောင် ကရယ်နေတာလေ သူတို့ က ထိုင်ကြည့်နေတာလေ ကိုယ့်မှာသာ လီးနှစ်ချောင်း မပျော့မမာ လေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ကာ ထုပေးနေရတယ် အေးတောင်လာမှ နင့်တို့ ဟာထဲ ပြန်ဆို့ ခိုင်းထားမယ် လို့ ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့တဲ့ မမ ဖင်ကုန်းပေးပါလား ဟင် ငါအလိုးမခံဘူးနော် မဟုတ်ပါဘူး မမ ညီမလေးကိုရန်မရှာပါဘူး မမ တင်ပါးတွေကိုကိုင်ပြီး သေချာမှုတ်ချင်လို့ဘာလို့ သေချာမှုတ်ချင်တာလဲ မမ စောက်ပတ်က တကယ်လှလို့ ပါ ဟဲ့ဒါဆို ငါတို့ ဟာကကော သြော် မမတို့ ညီမလေးတွေအားလုံးလှကြပါတယ် အနံအသက်တွေလဲကောင်းတယ် ဒီမမ ကတော့ တကယ်လှလို့ ပါ တက္ကသိုလ်နေဝင်းရဲ့ “သူလိုမိန်းမ” ထဲကလို လေးဗျ အောင်မာ မိစိုး မုန့် ဖိုးပေးလိုက်တော့ မြှောက်နေပြီ ဟဟ ဒီလောက်မြှောက်မှတော့ မုန့်ဖိုးပေးရမှာပေါ့ မဟုတ်ပါဘူး မမကို သာလုပ်ရလို့ကတော့ ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြော ကိုယ့်စားရိတ်ကိုယ်စားပြီး လာလိုးပေးမယ် တကယ်ပြောတာ ဖင်ဝလေးတွေက အစတကယ်လှတာ ပြောနေရင်း ဖင်ဝလေးကို ဖြဲ လျှာနဲ့ ဝလုံးလုံးပြစ်တာ စောက်ရေတောင် တောက်တောက်ကျတယ် စိုးစိုးရေဆွဲစားလိုက်ပါလား ငါ့ဟာကို ကိုမောင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူ့ ဟာမှမထည့်ဘူး ဖင်ကျတော့ကော… ဟိုတစ်ခါ လုပ်တုန်းကတော့ နာတယ် နောက် သူလဲနောက်မလုပ်တော့ပါဘူး ကုလားဆင်မလေးက ထပြီး မောင်လေးရေ ဖင်လိုးပေးလိုက်ပါလား။
မောင်လေး က အမ ကို ဖင်ချတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ မလုပ်ပါနဲ့ ဟာ နာတယ်ဟ ပြီးတော့ စိတ်ထဲလဲ တမျိုးပဲ ကိုမောင်သိရင် သတ်လိမ့်မယ် ပြောနေကြာတယ် မောင်လေးရေ ထည့်လိုက်တော့ ဟာနင်တို့ ကလဲ လာ လာ ဆိုပြီး ဟိုကောင်မနှစ်ကောင်က ချုပ်ပြီး ကျွန်မကို မှောက်ခုံဖြစ်အောင်ချုပ်ပါလေရော လူက မရုန်းချင်တာလား မူးတာလားတော့ မသိဘူး စောက်ပတ်ထဲတော့ လီးမထည့်ပါနဲ့ ဟာ ဖင်ကိုလဲ နာရင် မထည့်ပါနဲ့ ဆိုပြီးတောင်းပန်ပြောလေးပြောရသေးတယ် ကောင်လေးက ကွန်ဒုံးစွပ် ဂျယ်လေးဖင်ဝသုတ်ပြီး ထည့်တာ လျှောကနဲ ဆို ပြီး ဖင်ဝက ညှစ်ထားတော့ ချော်ပြီး စောက်ဖုတ်ထဲ ထိပ်ဝင်လာပါကော တော်သေးတယ် ဘယ်သူမှ မုမြင်ဘူး ဟိုကောင်မနှစ်ကောင်က ရှေ့ ကနေ လက်တွေကို ကိုင်ထားပြီး နောက်နှစ်ယောက်ကတော့ စိတ်မပါဘူးထင်ပါရဲ့ ဘလက် နဲ့ သုံးပါးသွားနေကြတယ် သူတို့ လဲ မောနေမှာပေါ့ ဟိုကောင်မတွေကို ဗျင်းထားရတာဆိုတော့ နားတော့မှာပေါ့ မဝင်ဘူးဆိုတော့ ဟိုကနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး ပြန်အထိုး ဖင်အကော့နဲ့ဒီတစ်ခါတော့ ဝင်လာပါတယ် သူကတော်တာလားကိုယ်ကလျှော့ထားတဲ့အချိန်လားတော့ မသိ ဟိုတစ်ခါကိုမောင် လုပ်သလောက်မနာပဲ လျှော လျှောလျှူလျှူ ပါပဲ နေလို့ လဲကောင်းတယ် ဟဲ့ကောင်းလား အင်းကောင်းတယ် ဒါများ မူနေသေးတယ် ခုနထဲက နေလိုက် ပြီးနေတာပဲ ကို စကားများတယ် ဟိုဖက်သွားတော့ ကောင်မ အခုကျတော့ ငြိမ်လို့ ….ဆိုပြီး ကောင်လေးတွေဆီသွားပြီး အရက်ထပ်သောက်နေတော့တယ် နောက်တော့ သူတို့ လေးယောက်လဲ ခုတင်ပေါ်သွားပြီး ပွတ်လိုက် လုပ်လိုက်နေမှာပေါ့ မမြင်တော့ပါဘူး ကွန်မတို့ နှစ်ယောက်က တော့ အခန်းထဲ တစ်ယောက်က မှောက်ခုံ နေ ပြီး တစ်ယောက်က ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပြီး ဖင်ချနေတာပေါ့ အဲဒီ့မှာပဲ သိလိုက်တာက လက်တစ်ဖက်က နောက်ကနေ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ဖင်အကြွ ဆောင့်ထည့်လိုက်တာက တော့ စောက်ဖုတ်ထဲကို တည့်တည့် နဲ့အဆုံးထိပါပဲ … အု ဆိုပြီး အသံတောင်မထွက်တော့ပါဘူး ကောင်းတာလဲပါပါတယ် သူကတော့ တိုးတိုးနဲ့ မမကို စောက်ဖုတ်လိုးတာ ဘယ်သူမှ မသိစေရပါဘူး ဆိုပြီး နောက်ကတော့ ဆောင့်လျက်သားပေါ့ ကျွန်မလဲ ဘယ်ရမလဲ ငြိမ်ခံနေလိုက်တာပေါ့ ဒီလိုတော့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး နည်းနည်းကြာတော့ သူပေါ်ကိုထိုင်ပြီး အားရပါးရ အချက်တစ်ရာလောက်ဆောင့်ပြစ်လိုက်တယ်။
သူကတော့ လက်နှစ်ချောင်းပူးပြီး ဖင်ထဲကို ထည့်ပေးထားသေးတယ် ကဲ ဘာလိုသေးလဲ ကွန်ဒုံးကို ချွတ်ပြီး လဥ ကိုဆွဲစုတ် ပြီး ဒစ်ကနေစပြီး စုပ်ပေးလိုက်တာ လရည်တွေများ သုံးခါလောက် ခွဲမြိုရတယ် ပြီးတာတွေတော့ ပြီးခဲ့ပါပြီ နောက်တော့ ကျွန်မ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ် ရတာတော့ ကိုမောင်နဲ့ ရတာပါ ကိုမောင်ကတော့ မယူချင်သေးဘူးရယ် မြို့ မှာပဲ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်တော့ ကျွန်မတို့ သုံးယောက်သတင်းကို ဘယ်ကဘယ်လို သိသွားလဲဆိုတာတော့မသိဘူး သူနဲ့ ရတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး လုပ်ပါလေရော ကျွန်မက…. လေးနဲ့ ရတာဆိုပြီး ပြီးတော့ စွပ်စွဲသေးတ စွပ်စွဲတော့လဲ လက်ထပ်ပြီးနေပြီပဲ ကိုယ့်ဖက်က မှန်တာတော့သေချာတယ် သူနဲ့ ရတာပဲ ဟိုကောင်လေးနဲ့ကွန်ဒုံးနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့တာလေ သူနဲ့ ပဲ ၇နှစ် လုံးလုံး တူတူနေပြီးတော့ ကလေးရတော့မှ သူမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတော့ အမေတို့ ကတော့ ဘာဖြစ်လဲ ငါတို့ လဲ ငွေရှိတယ် ဆိ်ုပြီး မပေါင်းခိုင်းပဲ သီးသန့် နေလာရကနေ ကွဲတာပဲ တူတူမှမနေကြတာကိုး ရန်ကုန်မှာ တစ်ယောက်ထဲနေတယ် သင်တန်းတွေတတ်တယ် အလုပ်တစ်ခုရတယ် အဲ့ဒီအလုပ်မှာ ပညာတွေ တော်တော်ရပြီးတော့ အခုcompany လေးမှာ အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ် မိုက်ကယ်နဲ့တွေ့ တယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆက်ဆံဖြစ်တယ် အတူတူ အလုပ်လုပ် တစ်ခါတလေ လိုးကြပေါ့ သူပြောတဲ့ အရာတွေကလဲ ကိုယ်က သိနေပြီးသားလေ (တသက်တစ်ကိုယ် အောကားတွေကြည့်လာလိုက်တာ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ အထိ မကြည့်ဖူးပါဘူး ချောင်းဖူးတယ်ဆိုတာလဲ အဲလို အထိတော့ မမြင်ဖူးပါဘူး ဒါပေမယ့် လိုနေသေးတာတော့ မစိုးစိုးရဲ့ နို့ တွေ ကို အခုထိ မမြင်ရသေးတာပါပဲ ” မင်းလိုအပ်နေတာတွေအတွက် မင်းဘာသာလုပ်ပေတော့ ”မိုက်ကယ်လဲ ပြောရော ဒီကောင်ကြီးက ငါ့စိတ်ထဲက အတွေးတွေကို သိနေတာပဲလို့တော်ကြာငါဖြုတ်ချင်နေတာများ သိနေရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ် မစိုးစိုး ရဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ‘ စိ စိ ‘ ဆိုပြီး ဝင်ထွက်သံတွေကလဲ တစ်ချက်ချင်း မှန်မှန် ထွက်ပေါ်နေပါတော့တယ် ကျွန်တော်လဲ မဆိုင်းမတွပဲ မစိုးစိုးရဲ့ စပို့ ရှပ်လေးကို ခါးလောက်ကနေ ကျောအပေါ်ဖက် အထိ လှန်တင်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ဘော်လီ ချိတ်ကိုပါ တစ်ခါတည်း ဖြုတ်ချလိုက်တယ် နို့ တွေပေါ်လာပြီ လို့ မထင်ပါနဲ့သူနို့ တွေ က စားပွဲပေါ်မှာ ပိနေတုန်းပါပဲ မိုက်ကယ် က အလိုက်သိစွာနဲ့မစိုးစိုးရဲ့ ခါးလေးကို နောက်ကို ဆွဲယူပြီး နောက် ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်ပြီး စားပွဲနဲ့ခြေလှမ်း ၃လှမ်းလောက် အကွာ နှစ်ယောက်ထိုင် ဆိုဖာလေးစီကို ဦးတည်သွားပါတော့တယ် ဆိုဖာလေးက ရုံးခန်းထဲက ဧည့်သည်တွေ ဘာတွေ လာတော့ ကော်ဖီတိုက် ဧည့်ခံတဲ့ နေရာလေးပါ အခုတော့ ကျွန်တော်ကြည့်ဖူးတဲ့ ဇာတ်ကား တွေထဲက ရိုက်တဲ့ နေရာလေးလိုပါပဲ အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော် လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ် ပြီးနောက်တော့ မစိုးစိုးလဲ အပေါ်ပိုင်း ဗလာဖြစ် အောက်ပိုင်းကတော့ မိုက်ကယ့်လီးက မစိုးစိုး အဖုတ်ထဲက မချွတ်တမ်း တစ်ချက်ချင်းဆောင့် လိုက် စိမ်လိုက်နဲ့ ဆိုတော့ လွှတ်ကောင်းပဲ တစ်ခုထူးခြားတာက မစိုးစိုးရဲ့ မျက်နှာ နဲ့ မျက်လုံးတွေ့ပဲ ရှက်နေတာတွေ မလုံမလဲဖြစ်နေတာတွေ မရှိပဲ ငါလုပ်ချင်နေတာတွေ လုပ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံဗျာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ဖာတွေ ချလာခဲ့တာ မနည်းပါဘူး မျက်နှာ တွေပေါင်းစုံတွေ့ ဖူးတာတောင် အဲလို မျက်နှာမျိုး မတွေ့ဖူးပါဘူး) အခုလုပ်နေတုန်းတော့ တံခါးဖွင်သံကြားတည်းက ကိုမျိုး မှန်းသိသားပဲ မိုက်ကယ် က တမင်တကာ မြင်ရအောင် တံခါးသွားဖွင့်တာကော အဲနေ့ ကတော့ ကိုမျိုးလဲ ဆွဲရပါတယ်။
နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ပေါ့ ကိုမျိုးက လူရည်သန့် တစ်ယောက်ဆိုတာရယ် ကိုယ့်အကြောင်းလဲ ပြန်ဖွမဲ့ လူလဲ မဟုတ်မှန်းသိနေတော့ လိုးကြတာပေါ့ အဲနေ့ ကမိုက်ကယ့်အခန်းမှာပဲ ကိုမျိုး နဲ့ က နှစ်ချီ မိုက်ကယ်ကတော့ သုံးချီ လူလဲ ပျော့ခွေ သွားတာပါပဲ ဦးနှောက်ရှိတဲ့လူတေါ ဆိုတော့ နောက်နေ့ အလုပ်လာလဲ ကိုယ့် အလုပ်ကိုယ်လုပ်နေတာပါပဲ ဟိုကိစ္စနဲ့ဒီကိစ္စ ကို မရောကြဘူးလေ မိုက်ကယ် က ကိုမျိုးနဲ့လုပ်ရင် သူ့ ရှေ့မှာပဲ လုပ်၇မှာဆိုတော့ နောက်ပိုင်း လေးခါလောက် တူတူ သုံးယောက်သယးလိုးဖြစ်ကြတယ် ကိုမျိုး တစ်ယောက် နှင်းနှင်းကို မိုက်ကယ် နဲ့ လွှတ်ပေးတဲ့နေ့ ကတော့ နှင်းနှင်းကိ်ု ပိုင်အိုးနီးယား ကလပ်ကိုခေါ် ဘီယာလေးတိုက် သုံးခွက်လောက်တိုက်ပြီးတော့ တော်တော် မူးနေပြီရယ် နောက်တော့ ယီစကီလေးနည်းနည်းတိုက် အစုံလဲတိုက်ရော ဘာမှ န်း နှင်းနှင်းတစ်ယောက် မသိတော့ ဘူးရယ် ကလပ်ထဲ အသင့်စောင့်နေတဲ့ မိုက်ကယ် က ကားနောက်ခန်းမှာ နှင်းနှင်းကို ဖက်ထားတော့ ကိုယ်က ကားမောင်းနေရင်းဒေါသထွက်တာ နည်းနည်း ဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်က သူ့ စော်ကို လိုးထားတာဆိုတော့ ကားမောင်းနေရင်းလီးတောင်တောင်တယ် ဒီလိုနဲ့ အခန်းရောက်လာတော့ မစိုးစိုး ကအသင့်စောင့်နေတယ် သောကတွေ ပြေပျောက်သွားအောင်လို့ တော့ မစိုးစိုးရဲ့ ရေချိုးထားတဲ့ တာဝါ ပတ်ထားတဲ့ကိုယ်လုံးလေးက ဆီးကြိုနေပါတယ် မိုက်ကယ်ကတော့ တစ်ခန်း ကျွန်တော်တို့ကတော့ တစ်ခန်းဆိုပေမယ့် မစိုးစိုးကို ဒီအခန်းမှာ တစ်ချီ နောက်တစ်ခန်းမှာတော့ သုံးချီလောက်ဆွဲဖြစ်တယ် မစိုးစိုးတစ်ယောက် ကျွန်တော် ပက်လက်လှန်ထားတဲ့ အပါ် ပြောင်းပြန်လှည့်ပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာကို mask တစ်ခုတပ်ထားစေပြီး သူကတော့ ကင်မရာတစ်လုံးချိန်ပြီး အမျိုး တက်လိုးနေတော့ လိုးနေရင်း တစ်ခုမေးလိုက်တယ်။
ဘာလို့ဗီဒီယို ရိုက်တာလဲ မစိုး ကိုမောင့်ဆီပို့ မလို့ဘာလို့ လဲ မင်းမျက်နှာ မပါပါဘူး သူဟိုနေ့ ကကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်တာကို ရိုက်ပို့ တယ်လေ သူက အွန်လိုင်းပေဓတင်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ အမ လဲ တင်လိုက်မှာပေါ့ သူလဲ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲ ကဲထားပါ လင်လေးရယ် ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပါဆိုပြီး ကျွန်တော် ခေါင်းပေါ် ခွပြီး ဘာဂျာ ကိုင်ခိုင်းလို့ သေချာကိုင်ပေးလိုက်ရတယ် ဆံပင်တွေကို ဆွဲ ပြီး အမှုတ်ခံတာ အသက်ရှုတောင်ကြပ်တယ် ပြီးတော့ ကင်မရာေ၇ှ့မှာ လေးဖက်ကုန်းပေးတယ် မောင်လေး လိုးပေးတော့ …(မျက်နှာကတော့ ခင်ဗျားတို့ မြင် ပြေးပြေးမလိုးချင် ကျုပ်သာလာသတ်) စိစိ ဖောင်း စွိ ဆိုတာ တယ်ကောင်းပါလား ကျွန်တော်လဲ တော်တော်လဲ ဆောင့်ပြီးတော့ ပြီးချင်လာတော့ ခဏလေးတဲ့ အမက ပြီးချင်လာပြီး မောင်လေးလဲ ပြီးချင်လာပြီ မဟုတ်လားဆိုတော့ အင်း အမ ပက်လက်လှန်ပေးမယ် မောင်လေး ပြီးချင်လာရင် အမသိတယ် အမက ကိုယ့်လိုးတဲ့ လူ က ပန်းထုတ်နေတဲ့ အချိန် မောင်လေးခံစားနေတဲ့ မျက်နှာလေး ကြည့်ချင်တာ အမလဲ ပြီးတယ် ကျွန်တော်လဲ ကုတင်စောင်းမှာတင်ပြီး ဆောင့်ဆောင့် လိုးပစ်တာ ကောင်းတယ်ဗျာ ညှစ်ပေးထားတာ တင်းတင်းလေး ဖတ် ဖတ် စွိစွိ ဆိုတဲ့ အသံတွေတောင် ထွက်တာ စိပ်နေတာပဲ တစ်ချက်ချင်းဆောင့်တိုင်း အဆုံးထိဆိုဝင်တယ် ပြီးချင်လာတော့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး လရည်တွေ သွင်းပစ်လိုက်တော့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ … စောက်ပတ် ထဲ က ညှစ်ညှစ် ယူတာ အကုန်လုံး ကို ကုန်ရော ကျွန်တော် တင်ပါးခွက်နေအောင် ညှစ်ပြီး ထည့်ထားတာ မစိုးဆိုတာ အဲတော့မှ မျက်လုံး စင်း ကျတယ် ပြီးသွားပြီ မောင်လေးရယ်တဲ့ ကင်မရာလေး ရှေ့ မှာပဲ စနိုးတာဝါလေး နဲ့ကျွန်တော့်လီးကို တယုတယ သုတ်ပေးတော့ ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ ကိုယ့်မိန်းမတောင် အလြောက် မလုပ်ပေးသေးဘူး ဟာ အခုမှ သတိရတယ်။
နှင်းနှင်းတစ်ယောက် အဆင်မှ ပြေရဲ့လားမသိဘူး တော်ကြာ နိုးလာလို့အော်လိုက် ဟစ်လိုက် မှ ဖြင့် ဒုက္ခ ဆိုပြီး မစိုး ကို ပြောပြီး သွားမယ်လုပ်တော့ သွားနှင့် လိုက်ခဲ့မယ် မောင်လေးရယ် ဟုတ် အမ အခန်း ကဒိုးလော့ပါပြီး ဟိုဘက်က လော့ မချထားတော့ ဖြေး ဖြေးချင်း ဝင်သွားလိုက်တတံခါး ဖွင့်ဖွင့်ခြင်း မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးက မမြင်ဖူးတဲ့ မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုရယ် တွေးထားပေမယ့် မြင်လိုက်ရတော့ ရင်တဒိတ်ဒိတ် ခုန်လာတော့တယ် ဘယ်လိုမျိုး ဖြစ်မယ် ထင်လဲ ဗျာ……. အင့်… အဟင့်… ရှီးးးးးးးးးးးးး အသက်ရှုသံပြင်းပြင်း……. စွိ……………..အင့် ဟင့်….ဟင်း ပလွတ်…… ဗွပ်…..ဗြလစ်…… ပတ်…..ပတ်…….ပတ်……. စွိ…စွိ…..ဇွိ……ဇွိ……… ပြွတ်….ပြွတ်………….. ကျွန်တော် မိန်းမလေး တော့ အမုန်း ဗျင်းခံနေရတာဗျာ ပျော့နေတဲ့ လီးတောင် ပြန်တောင်လာတယ် ကုတင်ပေါ်မှာ မိန်းမ က ပက်လက် လှန် ပြီး ခြေထောက် နှစ်ချောင်း က မိုက်ကယ့် ရဲ့ ပုခုံး နှစ်ဖက်ပေါ်မှာတင်လို့မိုက်ကယ့်လက်က ခါးကနေမတင်ပြီး အပေါ်ကနေ ဆောင့်ဆောင့်ချတာ အင့် ဟင့် ဆို ပြီး မျက်လုံးတွေ ကတော့ မူးလို့ မှိတ်နေတာပေါ့ အသံကတော့ လူကသာ ဘယ်သူမှန်းမသိတယ် စောက်ပတ်ကတော့ လီးကိုသိတယ် ကျွန်တော်လဲ …. ခုတင်နောက်ဘက် သွားပြီး ကြည့်တော့ နှင်းနှင်းစောက်ပတ် ထဲ မိုက်ကယ့်လီးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်၇တော့တာပဲ လီးကတော့ တော်တော် ကြီးတော့ ကျွန်တော့် မိန်းမ စောက်ပတ်ထဲ ကမိုက်ကယ့်လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ စောက်ပတ်သားတွေက လိပ်ပြီး ထွက်လာတယ် ဖင်ကြားထဲမှာလဲ စောက်ရေတွေဆိုတာ ပြစ်ချွဲချွဲစီးကျနေတာ မြင်ရတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကြည့် နေတုန်းမှာပဲ မိုက်ကယ့်ရဲ့ဆောင့်ချက်တွေ က ပိုစိပ်လာတယ် သူ့ ယောကျာင်္းေ၇ှ့မှာ သူ့မိန်းမကို လိုးရတာ ဘယ်လောက်တောင် အရသာတွေ ရှိနေလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သာ စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်တော့်လီးဆိုတာ မတ်မတ်ကိုထောင်နေတာပဲ အဲဒီ့အချိ်န် မစိုးစိုးလဲဝင်လာရော ကျွန်တော်လဲ တံခါး ရဲ့ ဘေးနံရံမှာ တစ်ဖက်ကို ဆွဲလှည့်ပြီး ဖင်ကိုဆွဲပြီး ကော့စေလိုက်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုး ပြစ်တာ သိပ်တောင် မကြာလိုက်ဘူး ခဏလေးနဲ့ပြီးတာပဲ။
မိုက်ကယ်ကတော့ နောက်တစ်ချီ စဖို့ အတွက် နှင်းနှင်း ပါးစပ်ကို ဟစေပြီး လီးစုပ်ခိုင်းနေတယ် နှင်းနှင်းကတော့ ပါးစပ်ပဲ ဟတာပါ မိုက်ကယ်ကတော့ လီးကို ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက် လုပ်နေတာပေါ့ ကျွန်တော်နဲ့ မစိုးကဆိုဖာပေါ်မှာ နားနေတော့ မိုက်ကယ်က နှင်းနှင်းရဲ့ ပျော့နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မှောက်ခုံလုပ်ချပြီး ခုတင်စောင်းမှာ ခြေထောက်ကို တွဲလောင်းကျနေစေပြီး သူ့ အရပ်နဲ့ချိန် ကွန်ဒုံး တစ်ခုကိုဖေါက်ပြီး အသေအချာစွပ် ပြီး ကျွန်တော် မိန်းမ စောက်ပတ်ကို တစ်ရှူးနဲ့ သေချာအရည်တွေကို သုတ်ပြီး ခုတင်အောက်ကနေ ကွပြီး သူ့လီးကို တစ်ချက်ထဲ အရှိန်ပျော့ပျော့ လေးစိုက်သွင်းချလိုက်တာ အဆုံးထိကို တန်းဝင်တာပဲ ကျွန်တော့မိန်းမ ပါးစပ်ကလဲ လေထွက်တဲ့ အသံကို ပါ တစ်ဆက်တည်းကြားလိုက်ပြီး ခြေဖဝါးလေးတွေ ကုပ်သွားတာ ဖြည်းဖြည်းချင်း မြင်လိုက်ရတော့ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး ငါသူများဆော်ကို လိုးတာတောင် အားမရသေးပဲ ကိုယ့်မိန်းမကိုတောင် လီးကြီးတဲ့ နိုင်င့ခြားသား ကအား၇ပါးရလိုးတာကိုတောင် စိမ်ပြေနပြေ ထိုင်ကြည့်နေမိသေးတယ်လို့တော်တော်မကောင်းတဲ့ လူပါဗျာ ကျွန်တော်ဆိုတာ….. မိုက်ကယ်ကလဲ ကျွန်တော့်မိန်းမ တင်းတင်းရင်းရင်းလေးကို တီးတာ ဒီတစ်ချီတော့ ခါးကိုပါလွှဲလွှဲပြီး လိုးတာ လေပါထွက်တယ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွက် ဘွက် ဆိုတာ ကျွန်တော့်မိန်းမထဲ သွင်းလိုက်တိုင်း ၄ချက်လောက်ကို တစ်ခါလောက်ထွက်နေတာ ပြောသေးတယ် မျိုး မင်းမိန်းမကို လိုးရတာ မိုက်တယ်…ဆိုပဲ .ကောင်းတာတော့ကောင်းမှာပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် အဲလိုကြီးပြောတော့ ရင်ထဲ သိပ်မကောင်းဘူးရယ် မိန်းမကလဲ ကျွန်တော်လိုကောင်က အကောင်းကြိုက် တဏှာကြီးတဲ့ကောင်က ရွေးယူထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ ဘယ်လိုပုံစံလေးများဖြစ်မလဲ စိတ်ကူးသာကြည့်တောံ့မိုက်ကယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ စောက်ပတ်ထဲ သူ့ လီး ဝင်ထွက်နေတာကို ကြည့်ပြီး အားရပါးရ ဆက်ဆံနေတာ နောက်တော့ ကျွန်တော်လဲ စိတ်လိုလက်ရလေး ကြည့်နေမိတယ်။
မိုက်ကယ်တော့ ငါ့မိန်းမကို ဘယ်လိုလေး လိုးရင် ကြည့်ကောင်းမလဲဆိုတာ တွေးလိုက် ကြည့်လိုက်နဲ့ဒါတောင် မနက်ကျတော့ တော်တော် ရှင်းရမယ် ကိုယ့်မှာသာ …..ဘယ်လို ရှင်းပြရမှန်း မသိတော့တာ အတိတ်ကတော့ ကျန်ခဲ့ပါပြီ အနာဂါတ်တွေသာ …..ရှေ့ဆက်ဖို့ ကျန်နေသေးတာ.. ဖြစ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး ဖြစ်ခဲ့တာ တကယ်တော့ နှင်းဝေမဝေတဲ့ နွေမကျ ဆောင်းမကျ ညမကျ နေ့ မကျ လေးတစ်နေ့မှာပေါ့ နှင်း ရင် တွေ မအေးမြခဲ့ဘူး မူးဝေနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နာကျင်ခြင်း အနည်းငယ်နဲ့နိုးထလာခဲ့ပါတယ် မှောင်မည်းနေတဲ့ အခန်းထဲမှာ အေးစိမ့်စိမ့်နဲ့ လရောင်လေးကျနေတဲ့ အချိန်မှာပေါ့ နှင်း ရင် တွေ မအေးမြခဲ့ဘူး မူးဝေနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နာကျင်ခြင်း အနည်းငယ်နဲ့ မျက်လုံးလေးပွင့်လာခဲ့တယ် အိပ်ယာရဲ့ညာဘက်ခြမ်းမှာ ရှိတဲ့ လွန့် ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်က လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ မျိုးမင်းကတော့ တစ်ဖက်လှဲ့ကာအိပ်စက်နေတုန်းပဲရှိပါသေးတယ် ဒီအချိန်မှာ ဟင် ကိုမျိုးရဲ့လက်နှစ်ဖက်လုံး က သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာလေ ဒါဆိ်ု ငါ့ခါးကိုဖက်ထားတာက နှင်းအလန့် တကြားနဲ့ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူမတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက် ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲ သေချာ သတိထားကြည့်လိုက်တော့ နှင်းမှာ အဝတ်တစ်ခုမှ မရှိနေတာရယ် တင်ပါးက ပျော့ဖတ်ဖတ်နဲ့ ထိနေတဲ့ -ီး တစ်ချောင်းရယ် ကပ်စီးစီးဖြစ်နေတဲ့ သူမရဲ့ ပေါင်ကြားထဲ က ခံစားမှုရယ်နဲ့မူးဝေနေတဲ့ ခေါင်းက ပြန်လည် လှဲကျ အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာတော့ နှင်းပြန်လည်နိုးထလာခဲ့တယ် ဦးနှောက်ထဲ ပြန်ရောက်လာတဲ့ အသိဟောင်းနဲ့ ဘေးတစ်ဖက်တဟ်ချက်စီကြည့်လိုက်တော့ နှင်းတစ်ယောက်ထဲရယ် အဲဒီ့အချိန်မှာပဲေ၇ချိုးခန်းတံခါးဖွင့်သံနဲ့ထွက်လာတဲ့ မျိုးမင်းကို တွေ့ လိုက်ရပါတော့တယ် မထူးနိုင်သေးတဲ့ မျိုးမင်းကိုကြည့်ပြီး မေးလိုက်တယ် “ကိုကို ညကဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလဲ ဟင် နှင်းတစ်ေ၇းနိုးတော့ ဘေးမှာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်လဲတွေ့ တယ် အိပ်မက်မက်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော် ကိုဘာတွေ လျှောက်လုပ်ထားတာလဲ “ ကို..ပြောလေ …ဘာလို့ အဲလောက်ထိ ဖြစ်လာရတာလဲ.. ကိုတောင်းပန်ပါတယ်… တောင်းပန်ခိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး အကြောင်းအရင်းကို သိချင်တာ ကိုရှင်းပြမယ် ..စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီး နားထောင်…”အရင်တုန်းက ကိုယ်ပြောထားတာလေ နှင်းလဲသဘောတူထားတယ်လေ” မိုက်ကယ်က စိတ်ချပါ နုတ်လုံပါတယ် ညတုန်းက နှင်းပဲ -ီးကိုသေချာစုတ်ပေးနေပြီးတော့ … ။
ဟာ မသိဘူးကွာ ဝိုးတိုးဝါးတားပဲ ကဲကဲ ရေချိုးတော့ သွားမယ် ဟိုတယ်က အခန်းအပ်ရတော့မယ် ဟို..ဟိုတစ်ယောက်ကော …. မိုက်ကယ်လား အင်း သူပြန်သွားပြီ မနက်ဖြန်ကျမှတွေ့ မှာ သူက ဘယ်ကလဲ ကိုယ့်တို့ရုံးကပဲလေ ဟာရှက်စရာကြီးကွာ…..(ကို့ ရုံးကို ဘယ်လိုလာပြီး မျက်နှာပြတော့မလဲ ရှက်လိုက်တာ) ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်ခွင့်မရတဲ့ ဘဝမှာ ဖြစ်နေတာတွေကို နှစ်သက်ဖို့ လူတွေက ကြိုးစားသင့်တယ်လို့နှင်းကထင်တယ် ပြန်မ၇နိုင်တော့တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို နှမြောနေမယ့်အစား ကိုယ့်မှာရှိနေတာလေးကိုပဲ ကျေနပ်နေတာ ကပိုကောင်းတယ်မလား အချိန်တွေ က ကုစားသွားမှာပါ မနေ့ ကတော့ နှင်းတစ်ယောက် စာအုပ်တွေ အင်တာနက်မှာရှာဖတ် သိချင်တာတွေ ရှာ နဲ့အရင်တုန်းကထက်စာရင် နည်းနည်းတော့ ပိုသိလာသလိုပဲ ကိုမျိူးလုပ် ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေက ခွင့်လွှတ်စရာ မကောင်းပါဘူွးှအရင်တုန်း ကတော့ နှစ်ယောက်အတူတူ ချစ်တင်းနှောတုန်းကတော့ သူစိတ်ပါအောင်ပြောပေးခဲ့တာတွေ က စိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ပဲ တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့ အိပ်မက်တောင် မမက်ဖူးပါဘူး ကိုယ်ကိုတိုင် သေချာဘာမှန်းမသိပဲ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ က တကယ်တော့ အိပ်မက်တွေ ဖြစ်ခြ့ရင်အရမ်းကောင်းမှာပဲ ”ချမ်းအေးလွန်းတဲ့ မိုးသည်းသောညလေးမှာ တယ်လီဖုန်းလေးအမှတ်မထင်ထမည်သွားတယ် ထူးထူးခြားခြား… ဟလို သူသူပြော ကောင်မစုတ် အိမ်ထဲမှာ အောင်းနေတယ် ငါ့ဆီဖုန်းတောင်မဆက်ဖူး အေးဟယ်ကိစ္စလေးတွေ ရှိနေလို့ဘာကိစ္စတွေ လဲ နင်လာခဲ့ဟာ အ်ိမ်မှာ ဘယ်သူမှမ၇ှိဘူး …. …. ။
ဟယ် ဒါဆို နင့်ကိုမျိုး က …… ပေါ့ အေးဟယ် ငါလဲ နေ့လည်ကမှ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့မှ သိရတာ အရင်တုန်းကလဲ အဲလိုမျိုးမှန်း မသိပါဘူး နင်ဘယ်သူ့ မှ လျှောက်မပြောနဲ့ နော် ဟဲ့နင် နဲ့ ငါက သူငယ်ချင်းတင် မဟုတ်ဘူး ညီအစ်မ တစ်ဝမ်းကွဲလေဟယ် အေးပါ ငါတော့ စိတ်တွေ တော်တော်ညစ်နေတယ် နင်အဲ့ညက ဘာမှ မမှတ်မိဘူးလား အင်း မနက် ဟိုတယ်က မထွက်ခင် ငါ ရေချိုးခန်းဘက် သွားတော့ ခုတင်ဘေးက အမှိုက် ပုံးထဲမှာတော့ ကွန်ဒုံး သုံးခုလောက်တော့ လရည်တွေနဲ့ အပြည့် ပစ်ထားတာတွေ့ တယ် တော်သေးတာပေါ့ နင့်ကို ဒီအတိုင်း မလုပ်တာပဲ ကံကောင်းတာလို့မှတ်ရတော့မှာပဲ အရင်တုန်းကတော့ ကို နဲ့အတူတူ နေတုန်းကပြောတာက ကိုယ်လုပ်ရတာ အရသာ ရှိအောင်လို့အင်း အဲဒါက တော့ ကို က အစပျိုးခဲ့တာလေ ကိုတကယ်လုပ်မယ်မှန်း မှ မသိတာ ပြီးတော့ ဒီလို လုပ်တယ် ဆိုတာ နှင်းဖက်က အဆင်သင့် ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာက ရှိသေးတယ် လေ ကိုယ်က အဆင်သင့် ဖြစ်မဖြစ်ကိုတော့ ဘယ်မေးရက်ပါ့မလဲ သြော် မမေးရက်ပဲ နဲ့မူးနေတဲ့ မိန်းမကိုတော့ လိုးနေတာတော့ သေချာ ကြည့်နေတယ်ပေါ့ မိုက်ကယ်ဆိုတာက…. မပြောနဲ့ တော့ မိုက်ကယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှန်း အခုသိပြီ…… ဖြစ်ပုံကိုသာရှင်းပြတော့ … အဲဒါက……..(အပေါ်မှာရေးသားထားသော အကြောင်းများ) အချိန် အနည်းကြာသော်… ကိုမျိုး ရှင်က သူများကောင်မလေးကို လုပ်ရတာ အားမရသေးပဲ နဲ့ကိုယ့်မိန်းမကိုတောင် ……… ဖြစ်အောင် ပါ လုပ်ပလိုက်တာပေါ့လေ ကိုရှင်းပြဦးမယ်လေ. အခုက ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်ချင်တာလဲ နှင်းရယ် ကို နှင်းကို အရမ်းချစ်တယ်လေ နှင်းလဲ ကို့ ကို အရမ်းချစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ရှေ့ဆက်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ကို့ ဖက်က သည်းခံမှ ဖြစ်တော့မယ် နှင်းက ဘာတွေ လျှောက်လုပ်မလို့ လဲ ဒါတွေ လာမမေးနဲ့ လေ ကိုတောင် ဘယ်လို ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားလေ နှင်းဘာတွေပဲ လုပ်လုပ် ကို့ ကိုတော့ ပေးသိမှာပါ နှင်း…… ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ဒုက္ခရောက်အောင် မလုပ်ပါဘူး ကိုလဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ဒီတစ်နှစ်လောက်တော့ ကလေးမယူသေးဘူးနော်။
ဘာဖြစ်လို့ လဲ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ပြီးမှပဲ မိသားစု ဘဝလေးထူထောင်တော့မယ် နှင်း သဘောပဲ နှင်းရယ် ကိုဖက့် မှားခဲ့တာပဲ ရပါတယ် ကို ရယ် အချစ်တွေတော့ မလျှော့ပါ့ဘူး အရင်လို ပါပဲ ကို ဝမ်းသာလိုက်တာ နှင်းရယ် ကိုမျိုးလက်တွေ က နှင်း၇ဲ့ တင်ပါးလုံးလုံးလေးတွေကို ညှစ်ပြီး ဖြေးဖြေးလေး နမ်းနေတုန်း.. ကို လွှတ်တော့ဆိုပြီး …ဆတ်ကနဲ ရုန်းပြီး အခန်းထဲ ဝင်သွားပါတော့တယ် ပြီးတော့ တံခါးပိတ်သွားတယ် ဟိုတစ်နေ့ ညက ကိစ္စပြီးကတည်းက လင်မယား နှစ်ယောက် အတူတူ မအိပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး နှင်းဖက်က စပြီး အဝင်မခံတော့တာပါ…… ပြီးပါပြီ။